नेपाल प्रहरीका ३५ एसएसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाल प्रहरीका ३५ एसएसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे? (सूचीसहित)
काठमाडौंः नेपाल प्रहरीका ३५ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को सरुवा गरिएको छ ।
गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट शुक्रवार एसएसपीको सरुवा भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
सरुवा अनुसार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उत्तमराज सुवेदी आएका छन् भने ललितपुरमा टेकप्रसाद राई आएका छन् । हेर्नुस् सूची–
याे पनि पढ्नुस डीआईजी डा. आशा सिंह एआईजीमा बढुवा
ट्याग्स: नेपाल प्रहरी, सरुवा